Misarika ny saina amin’ny #DalitLivesMatter ny Indiana · Global Voices teny Malagasy
Eo ambany fombafomba mahazatra fahiny izay manasokajy azy ireo ho "ambany kokoa" ny Dalits
Voadika ny 09 Jolay 2020 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, русский, Français, Español, English
Dalits nanatrika ny fanentanana ny zon'ny fananan-tany tamin'ny taona 2013. Matetika no voafitaky ny tompontany manankarena ny Dalits. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'ny Action Aid India. CC BY-NC-ND 2.0
Miezaka manaitra ny sain'ireo mpiray tanindrazana aminy amin'ny hetsika ao amin'ny tambajotra sosialy ny Indiana miaraka amin'ny #DalitLivesMatter (Misy Vidiny ny Ain'ny Dalit), ao anatin'ny fironana #BlackLivesMatter (Misy Vidiny ny Ain'ny Mainty Hoditra).
Nampiasaina voalohany tamin'ny volana Novambra 2014 ny tenirohy rehefa nanomboka nalaza ny #BlackLivesMatter. Saingy nanomboka navitrika kokoa ny volana Mey 2020 ny #DalitLivesMatter noho ny fitambaran'ny taona 2019 (fahavitrihana hoharina tamin'ny isan'ny lahatsoratra niaraka tamin'ny valinteny miisa 10 na mihoatra, ny mpankafy ary ny fampitana sioka).
Ho an'ny Dalits, sarangan'olona ambany indrindra heverina sy atao toy ny “tsy azo kitihana” ao India dia efa ela nisy akony tao amin-dry zareo ny ady amin'ny rafitra tsindrihazolena sy ny ady amin'ny rafi-piarahamonina nataon'ny Afrikana Amerikana. Tamin'ny taona 1972, naorina ny Dalit Panthers, aingam-panahy avy amin'ny fikatrohana ara-tsosialy nataon'ny Antoko Black Panther.
Any India, araka ny fomban-drazana, tsy misitraka ny zo amin'ny fanabeazana, ny fananan-tany, ny asa ny Dalits. Mbola hampiharin'ny antsasaky ny tokantrano manana kilasy sosialy ambony kokoa ny fomba fanao amin'ny tsy azo kitihina raha mandrara ny fanavakavahana miorina amin'ny saranga ara-tsosialy ny lalàmpanorenana Indiana. Ny fanitsakitsahan-dalana madinika ataon'i Dalits dia mety hahavoasazy amin'ny fanalam-baraka ka hatramin'ny fanamelohana ho faty .
Vakio bebe kokoa: Mbola Tànam-polo Ihany No Anadiovan'Ireo Ambany Saranga Ao India Ny Tain'ny Olona, Na Eo Aza Ny Lalàna Mandràra Izany
Vakio bebe kokoa: Milaza Ireo Mpianatra Dalit any India fa Midika ho Fanavakavahana ny tsy Fanomezana Vatsim-pianarana avy amin'ny Governemanta
Nanamarika ireo mpanoratra Bapuji sy Chrispal tao amin'ny lahatsoratra an'ny Journal of Business Ethics tamin'ny taona 2020 mitondra ny lohateny hoe “Understanding Economic Inequality Through the Lens of Caste,” (ny “Fahatakarana ny Tsy Fitoviana Ara-toekarena Avy amin'ny Mason-tsarangam-poko“) fa:
Manana herimpanintonana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekarena any amin'ny zana-kaontinanta Indianina sy any an-toeran-kafa ny drafi-tsarangam-poko, amin'ny alàlan'ny lalàna mandrara sy mametra ny mpisehatra amin'ny fandaminana ara-tsosialy manokana… .mitana ny tsy fitoviana ara-tsosialy sy ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fanao sy ny fahazarana andavanandro, toy ny anarana, ny fahazarana ara-tsakafo, ny fomba fitafy, ny lanonana, ny fombafomba ary ny fifandraisana.
Tsy mahazo rariny firy any amin'ny fitsarana ny Dalits rehefa miseho ny fanavakavahana. Misy ny porofo ara-tantara maro momba ny fanavakavahana ataon'ny polisy manoloana ireo olona manana marika ara-tsarangam-poko.
Novonoin'ny fianakaviana avy amin'ny kilasy ambony kokoa ny tovolahy Dalit iray rehefa avy nivavaka tao amin'ny tempoly tao Amroha, UP. Nandà izany ny polisy ary nilaza fa toa niady tamin'ny ankizilahy hafa ilay tovolahy. Toy izany ny fandehan'ny sarangam-poko any India ary mbola mitohy mandraka ankehitriny.
Notohanan'ny tatitra avy amin'ny (fikambanana tsy mitady tombombarotra) Common Cause [Fokokevitra Iraisana] sy ny Foibe Fanadihadiana ho an'ny Fiarahamonina Mandros ny tamin'ny taona 2019 ny fitantarana izay nanadihady ny fitanilan'ny polisy any India. Namintina ny tatitra fa ny 50%-n'ny polisy dia mino fa tsy marina na nohitarina ireo tatitra momba ny habibiana mahazo ny Dalits.
Hita taratra amin'ny zava-misy ny fitanilan'ny polisy satria avy amin'ny vondron'olona voahilikilika ny antsasaky ny gadra Indiana ary azo inoana kokoa fa ho faty any am-ponja izy ireo, hoy ny tatitra nataon'ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana Miady amin'ny Fampijaliana.
Mitotaly 1.731 ireo olona maty tany am-ponja tany India nandritra ny taona 2019 izay efa ho dimy isan'andro ary avy amin'ny vondrom-piarahamonina mahantra sy voahilikilika ny ankamaroan'ny niharam-boina, anisan'izany ny Dalit, foko sy Miozolomana.
Amin'ny fihenan'ny fiarovan'ny polisy, eo ambany fombafomba mahazatra fahiny izay manasokajy azy ireo ho “ambany kokoa” ny Dalits ary heverina fa eo ambany indrindra amin'ny rafitra ara-tsosialy sy ara-toekarena voatsinjara ny toerany.
Naka manga teo amin'ny trano akaikiny i Darbhanga, zanakavavin'i Ashok Paswan Jyoti Kumari. Hitan'i Arjun Mishra ilay zazavavy Dalit teo am-pamoasana ilay manga ary nosamboriny ka novoiny tamin'ny vato. Mitombo ny horohoron'ny fifandirana Brahmin ao Bihar.
Nanasarotra ny toe-draharaha ho an'ny Dalits izay miaina any amin'ny toerana be olona ary zara raha afaka manatona tobim-pitsaboana ny fihanaky ny Coronavirus. Miha-ratsy ihany koa ny herisetra mianjady amin'ny Dalits ankoatra ny fanavakahana azy ireo.
Voatsikera ny Indiana izay manohana ny #BlackLivesMatter noho ny fanohanany ny tolona Afrikana-Amerikana raha sady mbola miray tsikombakomba amin'ny fanambaniana ny Indiana namany izy ireo.
Tsy misy dikany ny fanohanan'ny Indiana ny Black Lives Matter ary tsy ilaina mihitsy raha toa isika ka tsy miresaka momba ny habibiana atao amin'ny Dalit monina eto. Tsy miresaka firy momba ny hatezerana momba izany isika.
Miady (irery) amin'ny (fanaziogàna) ny Dalit amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra maharitra toy ny fampiroboroboana ny fandraisana an-tanana sy ny fampianarana ny Indiana tonga saina. Araka ny nambaran'ilay mpaminavina Dalit Dr. Bhim Rao Ambedkar fa sarotra ny fanavaozana ara-tsosialy fa tsy hoe tsy azo atao.